ဖုန်းဝယ်ရင် သတိထားရမည့် အချက်လေးတွေ။ (ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်လိုက်ပါ။) – ရှအေလငျး
KNOWLEDGE • MOBILE • Review
ယနေ့ခေတ်မှာ စမတ်ဖုန်းယဉ်ကျေးမှုဟာ တဖြည်းဖြည်းတိုးတတ်လာခဲ့ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဟာ လူသားတွေရဲ့ဘ၀ကို များစွာအထောက်အကူပြုလာပါပြီ။ စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိကိုတိုးတတ်လာခဲ့ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ရင် အရွေးမမှားဖို့တော့လိုပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းဝယ်ရင် ဆောင်ရန်လေးတွေကို ကျနော်တို့ နည်းပညာချစ်သူကနေ ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်။
ယနခေ့တျေမှာ စမတျဖုနျးယဉျကြေးမှုဟာ တဖွညျးဖွညျးတိုးတတျလာခဲ့ပါတယျ။ စမတျဖုနျးတဈလုံးဟာ လူသားတှရေဲ့ဘဝကို မြားစှာအထောကျအကူပွုလာပါပွီ။ စမတျဖုနျးတှရေဲ့စှမျးဆောငျရညျဟာလညျး ကွောကျခမနျးလိလိကိုတိုးတတျလာခဲ့ပါတယျ။ စမတျဖုနျးတဈလုံးဝယျရငျ အရှေးမမှားဖို့တော့လိုပါတယျ။ စမတျဖုနျးဝယျရငျ ဆောငျရနျလေးတှကေို ကနြျောတို့ နညျးပညာခဈြသူကနေ ဝမြှေပေးလိုကျရပါတယျ။
ပြင်ထားတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဓာတ်ပုံများ
Xiaomi Phone များ အတုအစစ်ခွဲခြားနည်း
Vote တစ်သိန်းဖိုး ပေးဝယ်ခဲ့သူတွေက အခွေဝယ်ဖို့ကျ စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့ ရဲနောင်
ဖတ်မိတာလေးပါ . ကျမကိုဝိုင်းသတ်နေကြတယ်ကယ်ကြပါ လို့အော်သံကြားပြီးခနနေတော့ . . . 😞
အကြောဆေး သွင်းချင်သူများ ဒါလေး ဖတ်ကြည့်ပါ